Happiness – Healthy Life Journal
ပျော်ရွှင်ကျေနပ်သော နေထိုင်မှုဘ၀ရရှိစေရန် လိုက်နာသင့်သည့် အချက် ၃ ချက်
၊ ကိုမိုး ၊ (၁) ဦးတည်ချက်ထားပါ ကျွန်တော်တို့တွေရဲ့ တစ်နေ့တာ လှုပ်ရှားသွားလာနေထိုင်မှုအားလုံးမှာ အကြောင်းရင်းတွေရှိပါတယ်။ အားအင်ကုန်ခမ်းလာလို့ စားသောက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ကလေးတွေနဲ့အတူတူ ဆော့ကစားကြတာပဲဖြစ်ဖြစ် အားလုံးမှာ အကြောင်းရင်းတွေရှိပါတယ်။ ဘာကိစ္စကို ဘာကြောင့်ပဲလုပ်လုပ်၊ သင်လုပ်နေတဲ့ကိစ္စရဲ့ ဦးတည်ချက်အကြောင်းရင်းကို သိနေဖို့လိုပါတယ်။ ဒီလိုဦးတည်ချက်ရှိတာကြောင့် ခက်ခဲတဲ့အရေး...
ဒေါက်တာစိုးလွင် (သားဖွားမီးယပ်အထူးကုဆရာဝန်ကြီး) ယခင်တစ်ပတ်မှအဆက် ပျော်ရွှင်တဲ့သူ၊ အောင်မြင်တဲ့သူဆိုတာ . . . ပျော်ရွှင်တဲ့သူ၊ အောင်မြင်တဲ့သူဆိုတာ ကိုယ်လုပ်တဲ့အလုပ်ကို သေသေချာချာ၊ စေ့စေ့စပ်စပ်နဲ့ စိတ်ဝင်တစားလုပ်ဆောင်တဲ့သူပဲ ဖြစ်တယ်။“Not all of us can do great things....
ဒေါက်တာစိုးလွင် (သားဖွားမီးယပ်အထူးကုဆရာဝန်ကြီး) ဒေါသထွက်ခြင်း ဒေါသလို့ ပြောလိုက်ရင် စိတ်တိုတာ၊ စိတ်ရှုပ်တာ၊ စိတ်ညစ်တာ၊ စိတ်ဆိုးတာ၊ စိတ်မကြည်တာ၊ အားငယ်တာ၊ စိတ်ဓာတ်ကျတာ အကုန်လုံးပါတယ်။ ဒေါသမထွက်ဖူးတဲ့သူဆိုတာ ရှားပါတယ်။ သောကရောက်နေတဲ့အချိန်လိုပဲ လူတစ်ယောက် ဒေါသထွက်နေတဲ့အချိန်မှာလည်း ဘယ်လိုမှမပျော်နိုင်တော့ဘူး။ ဒေါသထွက်တော့မယ်ဆိုရင်၊ စိတ်ရှုပ်ပြီး စိတ်ညစ်တော့မယ်ဆိုရင်...
ဒေါက်တာစိုးလွင် (သားဖွားမီးယပ်အထူးကုဆရာဝန်ကြီး) ၂၀-၇-၂၀၁၇ ရက်နေ့က သူနာပြုတက္ကသိုလ် (ရန်ကုန်)မှာ သားဖွားမီးယပ်အထူးကု ဆရာဝန်ကြီး ဒေါက်တာစိုးလွင်က ဟောပြောပွဲတစ်ခု ကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ ဟောပြောချက်တချို့ကို စာဖတ်ပရိသတ်တွေအတွက် ပြန်လည်မျှဝေလိုက်ရပါတယ်။ – အယ်ဒီတာ _ _ _ ဘ၀မှာ အရေးကြီးဆုံး၊ တန်ဖိုးအရှိဆုံး...
ဒေါက်တာစိုးလွင် (သားဖွားမီးယပ်အထူးကုဆရာဝန်ကြီး) ၂၀-၇-၂၀၁၇ ရက်နေ့က သူနာပြုတက္ကသိုလ် (ရန်ကုန်)မှာ သားဖွားမီးယပ်အထူးကု ဆရာဝန်ကြီး ဒေါက်တာစိုးလွင်ရဲ့ ဟောပြောပွဲတစ်ခု ကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ ဟောပြောပွဲပြီးချိန်မှာ မေးမြန်းချက်တချို့ရဲ့ အဖြေတွေကို စာဖတ်ပရိသတ်တွေအတွက် ပြန်လည် မျှဝေလိုက်ရပါတယ်။ အယ်ဒီတာ မြုပ်နေတဲ့ ဗီဇလား၊ ၀ါသနာလား ....
ဒေါက်တာစိုးလွင် (သားဖွားမီးယပ်အထူးကု ဆရာဝန်ကြီး)မှ ဖြေကြားပေးပါသည်။ ဘ၀မှာ ဖိစီးမှုကြုံတဲ့အခါ . . . – ဖိစီးမှု (Stress) ကြုံတဲ့အခါ ဘယ်လိုဖြေရှင်းသင့်ပါသလဲ ဆရာ။ လူတိုင်းလူတိုင်း ဘာအလုပ်ပဲလုပ်လုပ် ဖိစီးမှု (Stress)ကို ကြုံရမှာပါပဲ။ အခက်အခဲတွေ၊ ပြဿနာတွေဆိုတာ...
ပျော်ရွှင်စေမယ့်ဆီရိုတိုနင်အထွက်တိုးဖို့ဆိုရင် . . .
၊ ငွေကြယ်စင်ယံ ၊ ဆီရိုတိုနင်ဆိုတာ စိတ်ခံစားမှုနဲ့ ပျော်ရွှင်ကြည်နူးမှုတို့အတွက် အရေးပါတဲ့ဓာတ်တစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။ ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာ ဆီရိုတိုနင် အတက်အကျဖြစ်တာက လူတစ်ယောက်ရဲ့စိတ်ခံစားမှု၊ အိပ်စက်မှုနဲ့ လေ့လာသင်ယူနိုင်စွမ်းတို့အပေါ် သက်ရောက်မှုဖြစ်ပေါ်စေပါတယ်။ ဆီရိုတိုနင်အဆင့်ကို မြင့်တက်အောင် လုပ်ဆောင်ပေးနိုင်မယ့် သဘာဝအစာတွေရှိပါတယ်။ – သစ်သီးများ သစ်သီးတွေမှာ ဗီတာမင်နဲ့သတ္တုဓာတ်အပြင်...
စိတ်ညစ်နေချိန် ချက်ချင်း စိတ်ပျော်ရွှင်လာအောင်
– ငါစိတ်ကြည်နူးတယ်၊ ငါစိတ်တည်ငြိမ်တယ်၊ အရာရာကို ချစ်ခင်မြတ်နိုးတယ် စတဲ့ အေးချမ်းကြည်နူးတဲ့ စကားတွေကို ရေရွတ်ပေးပါ။ – တိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်တဲ့ နေရာမှာထိုင်ပြီး မျက်စိတွေ ကိုမှိတ်ကာ အသက်၀၀ရှူပါ။ – အသက်ရှူထုတ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာ စိတ်အေးချမ်း တယ်ဆိုပြီး တိတ်တဆိတ်ရွတ်ပေးပါ။ – စိတ်ထဲမှာ...
ဘ၀တွင် စိတ်ချမ်းသာပျော်ရွှင်စေဖို့ ပြောင်းလဲပစ်သင့်သည့် အတွေးများ
ငွေကြယ်စင်ယံ ဘ၀မှာ ကံကောင်းလိုက်၊ ကံဆိုးလိုက် တစ်လှည့်စီ ကြုံဆုံနေရမှာပါ။ ကံမကောင်းတဲ့အခါ ကံဆိုးတယ်ဆိုတဲ့ အတွေးတွေးမယ့်အစား စိတ်ချမ်းသာအောင် ပြောင်းတွေးလိုက်ပါ။ တစ်ခါတစ်ရံ အဲဒီကံဆိုးမှုဟာ သင့်ဆီကို ပိုကောင်းမွန်တဲ့ ဘ၀ခရီးလမ်း ပို့ဆောင်ပေးနေတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် အခက်အခဲကြုံတိုင်း အတွေးတွေကို ပြောင်းလဲကြည့်ရ...